Telefaonina fitrandrahana anaty rano tsy misy rano avo lenta miaraka amin'ny hazavana fanilo - JWAT310, China Telephone mining amin'ny tany ambanin'ny tany tsy misy rano miaraka amin'ny hazavana fanilo - Mpanamboatra JWAT310, mpamatsy, orinasa - Ningbo Joiwo Explosion proof Technology Co., LTD
Telefaona matanjaka ho an'ny toe-javatra manjavozavo Fampiharana: Ao anaty sy any ivelany (IP66).
Miaraka amin'ny jiro / fanilo napetraka eo an-tampony, rehefa manana kal, dia hiposaka ny jiro. Ny keypad telefaona feno dia ahafahan'ny mpampiasa miantso isa izay safidiny. Ny herinaratra dia azo omena na dia ny laharana finday aza na ny mains na POE ary misy GSM Add-On-Module misy.
Ity telefaona tsy misy toetr'andro ity dia malaza be amin'ny tionelina, fitrandrahana harena ankibon'ny tany, an-dranomasina, ambanin'ny tany, toby fiantsonan'ny lalamby, sisin-dalambe, hotely, toeram-piantsonana, zavamaniry vy, zavamaniry simika, zavamaniry mahery ary fampiharana indostrialy adidy mavesatra sns.
6. Fonenana sy loko marobe.
7. IP miaro ny kilasy IP66.
7. Misy ampahany an-telefaona vita amin'ny telefaona misy.
8. CE, FCC, RoHS, ISO9001 no mifanaraka.
Zintin'aratra AC220V ± 10%, 50Hz
Ny asa fiomanana amin'ny fandaharana ≤0.2A
Herinaratra avo lenta 10W
Faharatsiana faharatsiana WF1
Ambient Temperature -40 ~ + 60 ℃
Hole mitarika 3-PG11
Frequency mitselatra maivana 1Hz
1 set / carton, 7kg / baoritra
5000 mametraka / isam-bolana
T / T, Paypal, Alibaba Trade Assurance, L / C na olon-kafa amin'ny fifampiraharahana.
Misy ny modely misy ary afaka maimaim-poana ho an'ny mpanjifa stratejika.
Ny santionany mahazatra dia ho vonona handefa amin'ny 3 andro fiasana.
Warranty 2 taona sy kojakoja azo ampiasaina hikarakarana.
Telephone Highway Armed Telephone Heavy Duty Analog tunnel Telephone - JWAT301
Telephone Industrial Railway misy fanamafisam-peo tsy misy rano - JWAT305